Olee Otú Ị Ga-esi Adị Ndụ Ebighi Ebi?(Jọn 2:17)
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Alur Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Baoule Batak (Toba) Bislama Brazilian Sign Language Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Georgian German Greek Greenlandic Gun Hebrew Hiligaynon Hmong (White) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Jamaican Creole Japanese Kannada Kikamba Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Kyangonde Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Moore Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Pennsylvania German Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Quichua (Chimborazo) Romanian Russian Samoan Sango Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Quiatoni) Zulu
Olee Otú Ị Ga-esi Adị Ndụ Ebighi Ebi?
Baịbụl kwere nkwa, sị: “Onye na-eme uche Chineke ga-anọgide ruo mgbe ebighị ebi.” (1 Jọn 2:17) Gịnị ka Chineke chọrọ ka i mee?
Mụọ gbasara Chineke na Ọkpara ya, bụ́ Jizọs. Jizọs kpere ekpere, sị: “Iji nweta ndụ ebighị ebi, ọ dị ha mkpa ịmata gị nke ọma, onye naanị ya bụ ezi Chineke, matakwa onye i zitere, bụ́ Jizọs Kraịst.” (Jọn 17:3) Olee ihe dị ‘n’ịmata Chineke na Jizọs nke ọma?’ Otú anyị ga-esi amata ha bụ ịmụ Baịbụl nakwa ime ihe ndị anyị na-amụta. * Baịbụl kwuru otú Onye kere anyị na Onye na-enye anyị ndụ, bụ́ Jehova Chineke, si eche echiche. (Ọrụ Ndịozi 17:24, 25) Baịbụl gwakwara anyị gbasara Ọkpara ya, bụ́ Jizọs, bụ́ onye kụziiri anyị “okwu nke ndụ ebighị ebi.”—Jọn 6:67-69.
Nwee okwukwe n’àjà Jizọs ji ndụ ya chụọ. Jizọs bịara n’ụwa “ka o jee ozi, ka o nyekwa mkpụrụ obi ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta.” (Matiu 20:28) Àjà Jizọs ji ndụ ya chụọ mere ka ụmụ mmadụ nwee ike ịdị ndụ ebighi ebi na paradaịs n’ụwa. * (Abụ Ọma 37:29) Jizọs kwuru, sị: “Chineke hụrụ ụwa n’anya nke ukwuu nke na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka e wee ghara ibibi onye ọ bụla nke nwere okwukwe na ya, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.” (Jọn 3:16) Ihe e kwuru ebe a gosiri na a chọrọ ihe karịrị naanị ikwere na Jizọs. Anyị kwesịrị ‘inwe okwukwe na ya,’ kpebiekwa ime ihe ọ kụziri na ime uche Nna ya.—Matiu 7:21; Jems 2:17.
Mee ka gị na Chineke bụrụ ezigbo enyi. Chineke chọrọ ka ị bịaruo ya nso ma bụrụ enyi ya. (Jems 2:23; 4:8) Chineke na-adịru ebighi ebi. Ọ gaghị anwụ anwụ. Ọ chọkwara ka ndị enyi ya dịkwa ndụ ebighi ebi. Chineke si n’Okwu ya bụ́ Baịbụl gwa anyị ihe ọ chọrọ ka ndị na-achọ ya nweta. Ọ sịrị: “Ka obi unu dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi.”—Abụ Ọma 22:26.
Echiche Na-ezighị Ezi Ndị E Nwere Banyere Ịdị Ndụ Ebighi Ebi
Ụgha: Ndị mmadụ nwere ike iji aka ha eme ka a dịwa ndụ ebighị ebi.
Eziokwu: Ọ bụ eziokwu na ọganihu ndị e nwerela n’ihe banyere ahụ́ ike na-eme ka ọ dị ka ndụ mmadụ ọ̀ na-agbatịkwu, ọ gaghị emeli ka ndị mmadụ dị ndụ ebighi ebi. Ọ bụ naanị Chineke ga-emeli ka anyị dị ndụ ebighi ebi, n’ihi na ọ bụ ya bụ “isi iyi nke ndụ.” (Abụ Ọma 36:9) O kwere nkwa na ya “ga-eloda ọnwụ ruo mgbe ebighị ebi,” ma mee ka ndị niile kwesịrị ntụkwasị obi dị ndụ ebighi ebi.—Aịzaya 25:8; 1 Jọn 2:25.
Ụgha: E nwere agbụrụ ọ bụ naanị ha nwere ike ịdị ndụ ebighị ebi.
Eziokwu: Chineke anaghị ele mmadụ anya n’ihu. Kama, “ná mba ọ bụla, onye na-atụ egwu ya ma na-eme ezi omume bụ onye ọ na-anabata nke ọma.” (Ọrụ Ndịozi 10:34, 35) Ụdị mmadụ ọ bụla si n’agbụrụ dị iche iche ga-adị ndụ ebighị ma ọ bụrụhaala na onye ahụ na-erubere Chineke isi.
Ụgha: Ndụ ebighi ebi ga na-agwụ ike.
Eziokwu: Ọ bụ Chineke, bụ́ onye hụrụ anyị n’anya ma chọọ ka anyị na-enwe obi ụtọ, kwere nkwa ime ka anyị dị ndụ ebighi ebi. (Jems 1:17; 1 Jọn 4:8) Chineke maara na anyị kwesịrị inwe ihe bara uru anyị na-arụ ka anyị nwee ike inwe obi ụtọ. (Ekliziastis 3:12) Chineke kwere ndị niile ga-adị ndụ ebighi ebi n’ụwa a nkwa na ha ga-enwe ọrụ bara uru ha ga na-arụ ga na-eme ha obi ụtọ. Ọrụ a ga-abara ma hanwa ma ndị ha hụrụ n’anya uru.—Aịzaya 65:22, 23.
Ihe ọzọkwa bụ na ndị ga-adị ndụ ebighi ebi ga-anọgide na-amụta ihe ọhụrụ gbasara Onye kere ha nakwa gbasara ihe ndị ọzọ o kere. O kere ụmụ mmadụ otú ha ga na-achọ ịdị ndụ ebighi ebi na-achọkwa ịmata onye ọ bụ. Ma, ha agaghị ‘achọpụta ọrụ ezi Chineke rụrụ site ná mmalite ruo ná ngwụsị.’ (Ekliziastis 3:10, 11) Ma, ndị ahụ ga-adị ndụ ebighi ebi ga na-enwe ọtụtụ ihe ndị magburu onwe ha ha ga na-amụta nakwa ihe ndị ha ga na-eme.
^ par. 2 Ndịàmà Jehova na-amụrụ ndị mmadụ Baịbụl n’anaghị ha ego. Ị chọọ ịmatakwu gbasara nke a, lee vidio aha ya bụ Olee Otú Anyị na Ndị Mmadụ Si Amụ Baịbụl?
^ par. 3 Gụọ isiokwu bụ́ “Olee Otú Jizọs Si Azọpụta?”
Ndụ na Ọnwụ Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara Ihe Ndị Ga-eme Ka I Nwee Okwukwe na Chineke Inwe Okwukwe na Chineke
Olee ihe mere o ji dị anyị mkpa ka Jizọs na-arịọchitere anyị arịrịọ? Ọ̀ bụ onye kwerehaala na Jizọs azọpụta ya?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Olee Otú Ị Ga-esi Adị Ndụ Ebighi Ebi?
ijwbq isiokwu 147
Ị Ga-adịli Ndụ Ebighị Ebi n’Ụwa